Onye na-ege ntị na anụ ọhịa bea | Apg29
Onye na-ege ntị na anụ ọhịa bea
M ga-eche na m ochie nlereanya na Christ di n'ebe ahu n'oge m bụ nwata dị ka a Christian. Ha nyere m ndụmọdụ na nkasi obi, ma na-baara.
Na Skellefteå m hụrụ ọtụtụ ụmụ mmadụ na-abịa okwukwe na anyị n'ụzọ nkịtị bi na Church. Mmụọ Chineke yiri ukwuu na m ụtọ na dị ka a na-eto eto Christian nwere na-enweta nke a. Ekele ndị a ime mmụọ nne na nna bụ ndị gere ntị na ebu m.
Ụfọdụ n'ime unu maara na m biri n'ebe ugwu Sweden maka afọ 23 nke ndụ m. Winter bụ ebube mara mma na ukwuu snow na ya ugbu a kọrọ na gnällbältet ebe Chineke mere m nke gị.
Na Skellefteå ebe m bi 1991-1994 mins otú ahụ ka m bönetanten Anna-Maja, o yiri abụghị nke ukwuu na emeghị ka nnukwu mkpọtụ na Pentikọstal ụka ebe m na-arụ ọrụ. Ọ nwere kọntaktị na elu-igwe na maara ihe na ekpere pụrụ ịrụzu.
Ọtụtụ mgbe, m bụ na Anna-Maja na ya, m nwere mmetụta na mmesi obi ike. M gwara m na-eto eto ịhụnanya enye ya nsogbu na ọ jụrụ m.
Anyị jụrụ maka Skelleftea na-eto eto na ndị mmadụ nzọpụta. M mụtara ịnọgidesi ike n'ekpere, bear mkpụrụ. Always otú anyị ekpere ọnụ mgbe ha bịara Anna-Maja.
Ebe m bi n'ọnụ ụzọ nke ọzọ ka Sven bụ onye bụbu pastọ nke Finland o we were ịhụnanya na-elekọta ya na-arịa ọrịa nwunye, ma n'ụlọ ha mgbe niile na-emeghe ka a nwa okorobịa na-hụrụ n'anya Jesus Christ.
Na Skellefteå m natara mmụọ nne na nna ndị na-akwado m na-ekpe ekpere maka m.
Bridget na Martin
Mgbe ahụ m ga-esi mee ka Bridget na Martin bụ ndị na-ekpere m na tere m mmanụ na mmanụ na i nwere ụgbọala, ee ha enweghị nri aran m.
Siri taa ịchọta Kraịst obi
Taa m maara na ọ bụ ike ahụ Kraịst ntụkwasị obi na-ekpe ekpere ọnụ, dị mwute ikwu. Ịchọta onye ga-ege ntị na tomato bụ ihe siri ike taa ịchọta. Anyị kwesịrị ịmụta na-ege ntị ọ bụla ọzọ na-agba ibe bụ ibu arọ.
M na na nke kacha mma onye dere ya, ma na-ede site na m adịghị ike na ihe mgbu. My ume na nsọpụrụ na Jizọs Kraịst bụ Onye Nzọpụta m na olileanya.
M chọrọ ibi dị ka Anna-Maja onye mere nnukwu nsogbu oge, kama ọ maara ihe abụọ na-ekpe ekpere aka nwere ike mezuo alaeze Chineke. Sven ịhụnanya na-emeghe home bụ ihe m nwere na-echeta. Bridget na Martin na udo maka Christ.